FAMPIADIANA TEO ANIVON’NY FIKAMBANANA SILAMO MALAGASY (FSM) : Tsy ho afa-bela i Mahafaly Solonandrasana Olivier
Tsy ho afa-bela ! 20 mars 2019
Raharaha maro no miandry ny Praiminisitra teo aloha, Mahafaly Solonandrasana Olivier. Ankoatry ny afera hafa mahavoasaringotra azy dia tsy ho afa-bela amin’ny loharano nipoiran’ny disadisa izay niteraka fampiadiana teo anivon’ny Fikambanana Silamo Malagasy na FSM ihany koa ny tenany.
Miseho masoandro ankehitriny ny fahalotoana kobonin’ny Praiminisitra teo aloha, Mahafaly Solonandrasana Olivier. Namaky bantsilana ireo endrika fanaparam-pahefana miharo kolikoly avo lenta nataony, teo anivon’ny Fikambanana Silamo Malagasy (FSM) ireo kaomity ao anatin’ny fikambanana, omaly. Araka ny fanazavana noentin’ny sekretera jeneralin’ny FSM, Ravoahangy Daniel Francis dia tsy manao politika ny Fikambanana Silamo Malagasy saingy tafiditra tao ihany ireo mpanao politika. Ireto farany anefa dia tsy nikatsaka afatsy ny tombotsoany manokana ary nanao fitaovana politika ny fikambanana mba hahazoana toerana ao anatin’ny fitondrana.
Ny fisian’izy ireo no anisany nanakorontana ny fikambanana noho ny fitiavan-tena sy fitiavan-tseza nibahan-toerana tamin’ireo mpanao politika isany mpikambana. Nandritra ny taona maro no efa nifandrirotra ity raharaha ity, lasa lavitra izany ankehitriny. Miroroa saina ny ankamaroan’ireo mpino silamo. Ankoatry ny filoha nofidian’ireo mpino silamo hitantanana ny fikambanana ao anatin’ny fe-potoam-piasana efa-taona mantsy dia misy filoha hafa, Abdoul Hady izay misora-tena ho filohan’ny FSM ihany koa. Ity farany dia mpanolotsain’ny Praiminisitra teo aloha, Mahafaly Solonandrasana Olivier sady minisitry ny atitany tamin’izany fotoana. Tetika nifanarahan’izy ireo no nahatonga azy ho filoha izay natao antsokosoko ny famoahana ny taratasy manamarina izany (recepissé).
Io no olana fototra eo anivon’ny FSM amin’izao fotoana izao. Miziriziry amin’ny maha filoha azy i Abdoul Hady raha toa kosa ka tsy manaiky izany ireo kaomity ao anaty birao sy ny ankamaroan’ireo mpino silamo anaty fikambanana. Ireto farany izay nanao ny ezaka rehetra hampilamina ny fianan-tokantranon’ny fikambanana amin’izao fotoana izao. Filoha voafidy ary eken’ny mpino ihany, hoy izy ireo, no azo ekena. Nanomboka tamin’ny taona 2009 mandraka ankehitriny dia tsy manaiky ny hanaovana fitaovana politika sy hitadiavana toerana ho an’ireo mpanao politika intsony ny filohan’ny fikambanana FSM.
Nandalo raharaham-pitsarana maro ny olana nisy teo anivon’ny Fikambanana Silamo Malagasy. Niady mafy ny hampilamina sy hamerenana amin’ny laoniny ny fikambanana ireo kaomity mpikambana. Ankilany anefa niady mafy ny hahazo ny toeran’ny filohan’ny FSM i Abdoul Hady, ilay mpanolotsain’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier. Tany am-boalohany dia mpikambana tao anatin’ny FSM i Abdoul Hady saingy rehefa nilatsaka ny fanapahan-kevitra tampoka noraisin’ny filohan’ny fikambanana fa tsy natao hitadiavana tombotsoa intsony ny fikambanana dia niala an-daharana ny tenany. Nanomboka teo, izany hoe ny taona 2009, no nampiasa ny fahefana nananany amin’izay, tamin’ny alalan’ny fampitenenana ny Praiminisitra teo aloha, Mahafaly Solonandrasana Olivier izy.
Nitady hirika i Abdoul hitaomana olona. Nisy ny hetsika nokarakarainy tao amin’ny lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahan-tena Mahamasina izay nilazany fa hisy lohahevitra hafa hoentiny. Fitaka bevava anefa no nataony satria rehefa tonga tao dia navadiny indray fa hisy ny fanavaozana Kaomity. Tiany ahatongavana ny ahazoana mpino silamo mba hanara-dia azy ka izy no lasa filoha, araka ny fanazavana voaray. Rehefa nifandrirarira tamin’ny raharaham-pitsarana dia nahazo rariny ny fikambanana ary sazy mihantona dimy taona an-tranomaizina kosa no azon’i Abdoul Hady. Taorian’izay tsy nitsahatra nanao izay fomba rehetra hahatonga an’ity mpanolotsainy ho lasa filohan’i FSM i Mahafaly Solonandrasana.
Nisy indray ny taratasy nalefany tao amin’ny fikambanana fa hisy ny fanavaozana ny sata mifehy ny fikambanana ka ireo olona miisa dimy izay efa niala an-daharahana no mbola nampidirina tokony ho mpikambana ao anatin’ny kaomity. Na dia tsy neken’ireo maro an’isa aza dia tanteraka soa aman-tsara ny volana septambra 2015 tany Mahajanga ihany io kaongresy io. Nilamindamin-dratsy ny fikambanana nanomboka teo.
Rehefa niha-mahamay ny toe-draharaha teto amin’ny firenena ny volana mey 2018, nipoahan’ny hetsika nataon’ireo 73 depiote nitakiana ny fialàn’ny Filoham-pirenena tamin’izany dia nikasa hialokaloka tao anatin’ny Fikambanana Silamo Malagasy indray i Mahafaly. Ny datin’ny 27 mey 2018 tonga teny amin’ ny Môske 67ha ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana sy ilay mpanolotsainy, ka nitondra vary sy menaka mba hanaovana “pi-maso” ireo mpino. « Nihevitra ingahy Lehiben’ ny Governemanta fa hanao fanambaràna politika ny tenako, saingy novaliko tsotra fa tsy manao politika ny fikambanana », hoy ny sekretera jeneralin’ny Fsm. Tsy nahafaly ny Praiminisitra teo aloha, Mahafaly Solonandrasana anefa io fihetsiny io ka natao amin’izay ny fomba rehetra ahazoany ny fikambanana.
Ny voalohan’ny volana jona 2018 dia namoaka “recepissé” antsokosoko ho an’i Abdoul Hady mpanolotsainy izy izay nilaza fa izy indray no filohan’ny fikambanana. Volana vitsy taorian’io anefa dia niala tamin’ny toerany sy ny fahefanana nananany i Mahafaly Solonandrasana ary lasa olom-pirenena tsotra rehefa voatendry ho Praiminisitra i Ntsay Christian niaraka tamin’ny governemanta vaovao. Mbola nanohy ny teti-dratsiny indray ilay mpanolotsaina ka namitaka ny Fitsarana. Tsy nanana ny fahefana nitsara io disadisa tao anatin’ny FSM io anefa ny Fitsarana teto Antananarivo. Voalaza ihany koa tamin’izany fa mamofompofona kolikoly ilay raharaha ka nalefan’izy ireo teny anivon’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly na “pôle anti-corruption” ny raharaha.
Araka ny nambaran’ny sekretera jeneralin’ny FSM hatrany dia andrasana eny amin’ ny Birao mahaleo tena miady amin’ ny kolikoly na Bianco ny raharaha izay mahavoarohirohy ity Praiminisitra teo aloha ity. Nambarany fa amin’ ity herinandro ity no ho tonga eny amin’ny Bianco izany. Azo antoka fa tsy maintsy hampiantsoina ny Praiminisitra teo aloha sady efa minisitry ny atitany nandritry ny Fitondrana Rajaonarimampianina Hery. Angatahin’ireo Kaomity ao anatin’ny Fikambanana FSM ny hampitsaharan’ny minisiteran’ny atitany ny fampiharana an’io “recepissé” navoaka tamin’ny fomba tsy ara-dalàna io. Ny Fikambanana Silamo Malagasy, hoy ny filoha lefiny Abousoary Said Arsène, no anisan’ny misahana ny fiainam-pinoan’ireo mpino silamo marobe manerana an’i Madagasikara ka tsy rariny raha toa ka mikorontana.
A.Lepecheur sy Avotra Isaorana